Date My Pet » Tips nokuti Dating With sorwonzi uye Other Mobile Apps
Paiva nenguva apo zvevakomana, vanhu vaviri vakanga kusangana mumwe nomumwe munhu; Ipapo akauya paIndaneti kufambidzana; uye kudanana ikozvino paIndaneti ane bazi idzva, kufambidzana kuburikidza Mobile mafomu.
The okupedzisira nemudzimai makore takaona pakuparurwa vanoverengeka Apps dzakadaro; yakanakisisa chinhu pamusoro vazhinji Apps avo ndiko kuti anogona kutorwa isina mutengo.
Nepo sorwonzi zvimwe ndiyo mukurumbira vakasununguka kufambidzana Anwendung, kune vamwe vakawanda adzo kuti vari kushandiswa zvikuru kwazvo; Mienzaniso inosanganisira hinji, OkCupid, Coffee Inosangana Bagel, Zvizhinji Fish, zvichingoenda zvakadaro.
Pazasi pane mazano kuti munhu anofanira kutevera apo kudanana naye sorwonzi nemamwe Mobile Apps.
Pick zvakarurama mifananidzo: Unofanira tora Photo wako nokungwarira pasinei kudanana Anwendung yauri kushandisa; pikicha yakanaka ndiyo nzira huru ichitora pfungwa zvinogona kufambidzana vamwe. zvisinei, ane kodzero mifananidzo inonyanya kukosha kana uri kushandisa sorwonzi, ndiro pikicha-inobva Anwendung.
On sorwonzi, mikana yako yokuwana machisa akakwana vanovimba kunyanya pamusoro Profile dzako mifananidzo. A zvakaipa Profile mufananidzo kuti kurega dzenyu kuroorana machisi kubva kufarira zvikuru iwe.
Zvakanakisa, wokutanga Profile mufananidzo imi Upload musi sorwonzi kunofanira kuva anokwezva Photo chako, chechipiri Profile mufananidzo vanofanira kuratidza kwako Chimiro uye yechitatu anogona showcase mararamiro ako kana chitandadzo.
Chimwe chinhu iwe haufaniri kuita, kunyanya kana uri mukadzi, ari uchiisa mapikicha uri mbudzana; vaiswe selfies uye cheesy Tit-kwepfuti anofanirawo kudziviswa.
Chenjerera paainyora kwako Profile tsananguro: Paunenge zvakakomba nezvokudanana, iwe havambofaniri kuedza kusika inoshamisa Aura kumativi pachako.
Yeuka kuti kunyange zvazvo uri uchishandisa kudanana App, chinangwa chako chikuru ari kusangana nevanhu chiso nechiso; saka, hapana pfungwa nhema kana inoratidza pachako somunhu usiri.
Kana zvose pamusoro pako hakuna kunaka, nyora pakati zvinofadza zvikuru chokuita newe uye anosanganisira kwavari yenyu Profile tsananguro. Usazengurira kushamisira kupfuura hunonakidza pamadziro hwako, Somuenzaniso kana uine inonakidza basa kana chitandadzo, nezvazvo zvizere.
Unogona kuva zvishoma witty zvakare sezvo vanhu vane zvishoma zvaiti nguva dzose akakurumbira zvikuru.
nguva dzose kupindura: Makagamuchira shoko pamusoro sorwonzi (kana zvimwe Mobile kufambidzana Anwendung yauri kushandisa), asi munhu kutumira shoko hariwaniki ruchiri kukangaidza imi zvikuru. Mumamiriro ezvinhu akadaro, pane kurega kutumira mhinduro, unofanira kurega mumwe munhu azive kuti hamufariri.
Dzidza nenguva mashoko ako: muromo Izvi zvinokosha kunyanya vakadzi; zvisinei, zvadai, Varume vanofanirawo kungwarira nguva mashoko vakatuma.
Kana iri vhiki, Vakadzi vanofanira kudzivisa kutanga ari mameseji spree pashure 10 p.m., vanogona kuzviita chete kana vari vachitsvaka zvepabonde.
Tariro Mazano aya kukubatsira kuwana machisa akakwana pamusoro sorwonzi kana zvimwe Mobile kufambidzana Anwendung pakuvhiya izvozvi. Just nechokwadi murege kumhanyira zvinhu zvakawanda; tichifunga chirevo chekare: “anononoka uye wakadzikama anokunda nhangemutange”.